Afa-Mamaky ny Angano Malaza amin’ny Fiteny Koria Ankehitriny ny Mpamaky · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jona 2015 3:07 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, Español, bahasa Indonesia, 日本語, English, عربي, русский, Italiano, English
Nanamarika ilay blaogera sy mpikatroka an-tserasera ho amin'ny fiteny koria Kevin Brousseau fa efa nisy namadika ho amin'ny fiteny anglisy ireo tantara Koria nentim-paharazana, saingy tsy nisy nanao kosa izany amin'ny setrin'izany rehefa tsy hita ho voavadika ho amin'ny fiteny koria ireo tantara hafa malaza [amin'ny fiteny anglisy]. Nolazainy nandritra ny antsafa nifanaovany tamin'ny Rising Voices izany :
Nanomboka tamin'izay fotoana izay ny faniriany hametraka ireny tantara malaza ireny ho vonona ho an'ny olona maro hafa ao amin'ny blaoginy Cree Language. Hatramin'izao i Brousseau dia nahadika angano malaza toy ny ‘kavina volamena’ sy ireo kisoakely telo, sy ny sasantsasany ao amin'ny Anganon'i Aesop amin'ny Koria Atsimo Atsinanana sy Koria Moose.
Cree [izay soratana ao amin'ny lahatsoratra hoe koria] no fiteny teratany mieli-patrana indrindra ao Canada, ary ahitana tenim-paritra isan-karazany ao aminy ao. Fiteny ofisialy izy ao amin'ny Zaratany Avaratra Andrefana, ary ankatoavina ho fitenin'ny vitsy an'isa any amin'ny faritany dimy. Araka ny fanisam-bahoaka Kanadiana tamin'ny taona 2006, dia tokotokony ho 120.000 eo ho eo ny mpiteny azy amin'ny fitenim-paritra isan-karazany.
Raha jerena indray ny fisiany eo amin'ny Internety, dia voamarik'i Kevin fa niaka-danja an-tserasera ny fiteny koria tao anatin'ny taona vitsivitsy, saingy mbola “ao anatin'ny fahazazany” kosa ny fifampitam-baovaon'olontsotra Koria. Ankoatra ny blaoginy dia tanisainy ihany koa ireo tetikasa an-tserasera izay miasa ho fampiroboroboana ny fiteny, tahaka ny Cree Literacy, tambajotra iray mampiroborobo ny fiteny sy ny kolontsaim-pamakianteny koria. Misy blaogy iray antsoina hoe âpihtawikosisân soratan'ny vehivavy metisy Koria avy eny amin'ny lemaka monina ao Montreal. Ny Little Cree Books dia tetikasa an-tserasera iray mikendry ny hamoaka lahatsoratra maimaimpoana amin'ny fitenim-paritry ny Lemak'i Koria, ary ireo rehetra ireo dia eo ambany lisansa Creative Commons.
Ao amin'ny media sosialy, maroireo vondrona Facebook mizara fitaovana, fampianarana voambolana na fehezanteny fototra, na miasa ho sehatra ahafahan'ny olona mifandray amin'ny fiteny koria. Ary ao amin'ny Twitter, dia hita tsindraindray eny ny diezy #speakcree sy #nêhiyawêtân. Na i Kevin tenany aza ao amin'ny @_Kepin_ dia mizara teny fampaherezana ny hafa te-hizara ny ilay fiteny :
Aza adinoina ny #SpeakCree (miteny koria) amin'ny manodidina sy amin'ny zanakao anio. Velomy imaso ny fitenintsika!
Na dia mihabetsaka aza ny vontoaty amin'ny fitenim-paritra maro ao amin'ny fiteny koria, dia mbola maro ireo fanamby miandry ny vondrom-piarahamonina indrindra rehefa tonga eo amin'ny fomba fanoratra tsy manampaharoa, antsoina ihany koa hoe manara-baninteny, ao amin'ny fiteny ao amin'ny web. Hoy izy :
Tantaran'ny Kanadà farany
20 Janoary 2021Eoropa Afovoany & Atsinanana
20 Mey 2019Amerika Avaratra